Dozie: Heatmaps efu na ndekọ oge maka nkwalite weebụsaịtị | Martech Zone
Dozie: Igwe ọkụ n'efu na ndekọ oge maka nkwalite weebụsaịtị
Tọzdee, Disemba 30, 2021 Tọzdee, Disemba 30, 2021 Douglas Karr
Dịka anyị mere ma mepụta isiokwu Shopify maka anyị ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị, Anyị chọrọ ijide n'aka na anyị haziri saịtị ecommerce mara mma ma dị mfe nke na-emeghị ka mgbagwoju anya ma ọ bụ mebie ndị ahịa ha. Otu ihe atụ nke ule imewe anyị bụ a ozi ndị ọzọ ngọngọ nke nwere nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ebipụtara ngalaba na mpaghara ndabara, ọ ga-agbada ọnụahịa ahụ nke ukwuu wee tinye na bọtịnụ ụgbọ ala. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị bipụtara ozi dị n'okpuru ebe a, onye ọbịa ahụ nwere ike na-atụ uche na enwere nkọwa ndị ọzọ.
Anyị kpebiri ime ngalaba ntụgharị aha nke ọma More Ozi. Otú ọ dị, mgbe anyị bipụtara ya na saịtị ahụ, anyị chọpụtara ozugbo na ndị ọbịa anaghị pịnye na ngalaba ahụ iji gbasaa ya. Ndozi ahụ dị aghụghọ… obere ihe ngosi na-esote aha ngalaba. Ozugbo etinyere ya, anyị lere maapụ ikpo ọkụ anyị wee hụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọbịa na-akpakọrịta ugbu a.
Ọ bụrụ na anyị anọghị na-edekọ nnọkọ ma na-emepụta maapụ okpomọkụ, anyị agaraghị enwe ike ịchọpụta okwu a ma ọ bụ nwalee ngwọta ya. Heatmapping bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-emepe ụdị webụsaịtị, saịtị ecommerce, ma ọ bụ ngwa ọ bụla. Nke ahụ kwuru, ngwọta okpomọkụ nwere ike ịba oke ọnụ. Ọtụtụ dabere na ọnụọgụ ndị ọbịa ma ọ bụ nnọkọ nke ịchọrọ soro ma ọ bụ dekọọ.
Obi dị m ụtọ na otu nnukwu na ụlọ ọrụ anyị nwere ngwọta efu dị. Ihe doro anya Microsoft. Naanị tinye koodu nsochi doro anya na saịtị gị ma ọ bụ site na ikpo okwu njikwa mkpado gị ma ị na-agba ọsọ n'ime awa ka ejidere nnọkọ. Ọbụna nke ka mma, Clarity nwere nchịkọta Google Analytics… na-etinye njikọ dị mma maka nnọkọ playbacks n'ime dashboard Google Analytics gị! Ịdị ọcha na-emepụta akụkụ omenala a na-akpọ URL nwughachi doro anya ya na nhụta ibe. Ihe ndetu akụkụ… n'oge a, ị nwere ike itinye naanị otu akụrụngwa webụ iji jikọta na Clarity.
Microsoft Clarity na-enye atụmatụ ndị a…
Igwe ọkụ ngwa ngwa
Mepụta okpomọkụ na-akpaghị aka maka ibe gị niile. Hụ ebe ndị mmadụ pịa, ihe ha na-eleghara anya, na ebe ha si pịgharịa.
Lelee ka ndị mmadụ si eji saịtị gị nwere ndekọ nnọkọ. Chọpụta ihe na-arụ ọrụ, mụta ihe kwesịrị imeziwanye, wee nwalee echiche ọhụrụ.
Ntụle na ngalaba
Chọpụta ngwa ngwa ebe ndị ọrụ na-enwe nkụda mmụọ wee gbanwee nsogbu ndị a ka ọ bụrụ ohere.
Ịdị ọcha bụ GDPR na CCPA dị njikere, anaghị eji nlele eme ihe, ma wuo ya na ebe mepere emepe. Nke kachasị mma, ị ga-anụ ụtọ atụmatụ Clarity niile na ọnụ efu efu. Ị gaghị na-agba ọsọ n'ime okporo ụzọ ókè ma ọ bụ a ga-amanye kwalite ka a akwụ ụgwọ version… ọ bụ ruo mgbe ebighị ebi free!
Debanye aha maka Microsoft Clarity
Tags: doo anyanjikarịcha ecommerceMicrosoft doo anyandekọ ogenjikarịcha saịtịtestingnjikarịcha weebụsaịtị